नर्स बन्ने सपना हिरोइन बनेर पूरा « Tuwachung.com
४. श्रवण मुकारुङले शान्तिराम राईलाई भने– तपाईंको स्वर मन परेन नगाउनूस्
६. यसरी लेख्न सकिन्छ थेसिस (पाठ १ देखि २९ सम्म)
७. नेकपा खोटाङ (ओली समूह)द्वारा भ्रमको राजनीति
८. साहित्य पनि कलात्मक राजनीति
९. पाँच सय रुपैयाँको नोटमा भावुक प्रेमपत्र
१०. त्यहाँ बग्छन् जोरकोसी यहाँ भिज्छ रुमाल
११. ८ वर्षीया छोराले देख्नेगरी झगडा गर्ने नेपाली दम्पती अमेरिकी अदालतमा हाजिर
१२. फुपुकी छोरीलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा ५३ वर्षीय पुरुष घरबाटै पक्राउ
नर्स बन्ने सपना हिरोइन बनेर पूरा
देवेन्द्र सुर्केली	२०७७ पुष १८, १६:४८
अप्सरा सेर्मा साथीसंगीबीचमा आफू केही अग्ली र राम्री थिइन् । उसै त तराईको भूमिमा चलचित्रको फेसनले छपक्कै छोइहाल्ने । साथीहरूले ‘तँ त पछि हिरोइन हुन्छेस्’ भन्दा मन फुरुङ्ग हुन्थ्यो । अनि कता कता हिरोइन हुने सपनाले गाँज्ने गथ्र्यो । हिरोइनहरूले छमछमी नाचेको अनि मौका पाउँदा फाइट पनि खेल्नुपर्ने हुदा थुप्रैपटक साथीहरूमाझ नाच्ने, संवाद बोल्ने र फाइट खेल्ने क्रियाकलाप हुन्थे । साथीहरूसँग लहडैलहडमा कराँते सिक्न पुग्दा किन सिकेको भन्ने सोधनी हुन्थ्यो । आत्मरक्षाका लागि भन्ने बनावटी उत्तर दिने गरे पनि खासमा हिरोइन भएपछि भिलेनलाई किक हान्ने सोख ज्यादा थियो ।
घरकी ६ बहिनीमध्ये उनी साइँली । उनकै भाषामा भन्नुपर्दा, ‘राम्री नै थिएँ कि कुन्नि, अप्सरा नाम राखिदिए अभिभावकहरूले ।’ बुवा भारतीय मेजर गञ्जवीर सेर्मा आधुनिक शैलीका तर कडा मिजासका थिए । लामो समयसम्म भारतीय सेनामा रहनुपर्दा बलिउडका चलचित्रको प्रभावले छोरीको नाम जुराउन मद्दत पुग्यो होला । रवाफिला गञ्जवीर वंश धान्नकै लागि ६ जना छोरीको जन्मपछि एक भाइको आगमन गराएको रमाइलो कहानी थियो ।
धरमपुर र दमक गरी दुई ठाउँमा थियो घर । यताउता गरिरहनुपर्ने । स्कुल भने दमकमै सबै दिदीबहिनीहरूले पढे । हाल उच्चमावि बनिसकेको सरस्वती मावि थियो अप्सराको बाह्रखरी चिनाउने स्कुल । निमावि कक्षामा पढ्दापढ्दै कहिले कविता लेख्ने, सांस्कृतिक कार्यक्रममा भाग लिने गर्थिन् । त्यो बेलादेखि नै उनको दृढ प्रतिज्ञा थियो केही गर्ने र नाम कमाउने । सिर्जनात्मक कार्य गर्न नसके नर्स बनेर समाजसेवा गर्ने ।
अचानक एक दिन उनले चलचित्र ‘देउमाईको किनारमा’ को सुटिङ हेर्न पुगिन् । सुटिङ हेरेपछि नायिका बन्ने इच्छाले अग्घोरै सतायो । आफ्नी दिदीलाई इच्छा व्यक्त गरिन् । उक्त चलचित्रका निर्देशक प्रेम सेर्मा र सुरेन्द्र सेर्मा आफ्नै वंशजका भए पनि चिनजान थिएन ।
चलचित्रमै कलाकार रहेका डीएम नेम्वाङसँग दिदीको चिनजान थियो । दिदीले डीएमसँग खेलाइदिने आग्रह गरिदिन्छु भनेर वचन दिइन् । त्यो रात अप्सरालाई निन्द्रै लागेन रे । डीएमबाट निर्माता/निर्देशकसँग भेटघाट भयो र फोटोसेसन भयो अनि पुष्पा भन्ने पात्रको छोटो भूमिकामा अभिनय गरेर आफ्नो इच्छा पूरा गरेकी अप्सरालाई भर्खरैजस्तो लाग्छ ।
सानोमा साथीहरूले ‘तँ त हिरोइन बन्छेस् होला’ भन्ने गरेको उद्गार छोटो भूमिकामै भए पनि चलचित्रमा प्रवेश भएपछि के चाहियो र ? उनी गाउँको सानोतिनो सेलिब्रेटी बनिन् । नयाँ वर्ष तथा दसैंमा हुने नाटकहरूमा उनकै माग हुन थाल्यो । उनीसहितको टोली नाटक प्रदर्शन गराउन उर्लाबारी, बेलबारी र धरानसम्म पुगेको थियो । तुम्दङ भन्ने लिम्बू भाषाको नाटक निकै चर्चित भयो । पुराना बस्ती, भरियाको जिन्दगी, बिहानीलगायत नाटक गरेको उनी सम्झन्छिन् ।
चर्चित नाटक तुम्दङलाई फिल्मांकन पनि गरिने भयो । उक्त चलचित्रबाट उनले नायिकाका रूपमा पदार्पण गरिन् । त्यसपछि पूर्वी नेपालमा बन्ने गरेका चलचित्रमा भइरहेको नायिकाको अभावलाई टार्ने क्षमतावान् कलाकारका रूपमा दरिइन् । निष्ठुरी माया, अमरप्रीति, आनिसाक्थिम, मासेमीलगायतका चलचित्र र टेलिसिरियल पाहुनामा क्रमशः नायिका बन्दै आइन् ।
अप्सराको क्षमता तत्कालीन नायिकाहरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्ने थियो । तसर्थ, काठमाडौं आएर संघर्ष गर्नुपर्छ भनेर खाल्डो नटेकेको पनि होइन, काठमाडौं आएर खुकुरी, आफ्नो बिरानो चलचित्रमा छोटो रोल गरेकी उनको जीवनले अर्कै मोड लियो । किनभने उनले धरमपुरकै पूर्ण नेम्वाङसँग विवाह गरिन् । श्रीमान्को सहयोग राम्रै पाए पनि माइतीमा मेजरको छोरी भएर पुल्पुलिएकी उनलाई नयाँघरमा आफैंले बनाउनुपर्ने संसारसँग जुध्न पर्यो । विवाहपश्चात् लगातार जन्मिएका छोराहरू नाम्लिङ र तान्छाका लागि पनि केही सोच्नैपर्यो ।
निरन्तरता दिँदा नेपालको कलाकारिताले उति उँभो नलागिने, केही गरौं त्यस्तो सीप केही छैन । यताउति गर्दागर्दै दुई/तीन वर्ष बितिगयो । अचानक उनमा उपाय फुर्यो कि विदेश जाने ।
विदेश जान केही राम्रो देश बुझेर अप्लाई गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन् । उनको ताक जापान थियो । तर, केही ढिला हुने भएकाले हतारिएको मनलाई कसैले साइप्रस जाने बाटो बताइदियो । उनको भाग्य त्यतै रहेछ, अप्लाई गरेको १५ दिनमै भिसा आयो । संवत् २०६३ मा उनी साइप्रस उडिन् । जम्दै गरेको एउटा प्रतिभाशाली कलाकारलाई वैदेशिक रोजगारीको बाटोमा समाहित गरिन् ।
विदेशको ठाउँ नेपालजस्तो कहाँ हुन्थ्यो । विकसित देश त्यसै भएको होइन । अल्छीको कामै छैन । चौबीसै घन्टा काम गर्न सक्ने मालिकको प्यारो हुने, कामचोर सदाका लागि बिदा हुने अवस्था थियो । उनले निकै सास्ती पाइन् । नेपाली त झन् लुटाहा, ठगमात्रै भेटिने ।
संघर्षका बाबजुद बिरानो ठाउँलाई आफ्नो बनाएरै छाडिन् । मालिकमालिकनी आफ्नै बुवाआमाजस्तो बनाउन सफल भइन् । रोमानिया, फिलिपिनी, भियतनाम, रसियाका मिल्ने साथी बनाइन् । रोमानियाकी एलिना त आफ्नै बहिनीजस्ती भइन् । आज भन्यो, भोलि भन्यो काम गर्दै जाँदा आठ वर्ष बितेको पत्तै भएन ।
बाबिया सुपरमार्केट उनले काम गर्ने ठाउँ । यसबीचमा धेरै नेपाली संस्थासँग नजिक भइन् । कार्यसमितिमा रहेर काम गर्ने मौका भने पाइनन् । विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदा सहयोगी भूमिका गर्ने, कविता वाचन गर्ने गर्थिन् । कुनै बेला विद्यार्थीको चाप निकै थियो साइप्रसमा । पछिल्ला दिनमा भने चाप घटेको थियो । एकपटक नेपालीबीच सानो पार्टी मनाएर हल्ला गर्नेक्रममा प्रहरीले खानतलासी लिन खोज्दा पाइपबाट भाग्न खोज्ने एक अवैधानिक नेपाली महिलाको लडेर मृत्यु र अर्को एक महिलाको श्रीमान्ले नेपालमा अर्कै श्रीमती ल्याएको निहुँमा आत्महत्या गरेको नमीठो सम्झना छँदै छ । खाडी मुलुकलगायत मलेसियामा नेपाली सुतेको सुत्यै भएको समाचार पढिरहने अप्सराले साइप्रसमा दुई नेपालीको यस्तो मृत्यु हुँदा निकै निराश बनेको अनुभूति बाँडिन् ।
उनी हिजोआज नेपालमै छिन् । आठ वर्षसम्म श्रीमान् र छोराहरूको विमुखमा रहनुपरेको न्यास्रोलाई मेट्न उनी स्वदेश फर्केकी हुन् । आधा दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरिसकेकी उनले आफ्नो कामप्रति सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले केही गर्ने जोश बोकेर नेपाल फर्केकी हुन् । उमेर छउन्जेल केही कमाउनैपर्छ कि भन्ने पापी मनले गाँजिरहेको छ । उनले कमाउन त केही कमाएकी छन् तर मान्छेलाई कहाँ पुग्छ र ?
प्रायः आफ्नो कथाव्याथालाई कवितात्मक रूपमा खरर्र सुनाउने अप्सरा कोमल मनकी छिन् । उनले धेरै डायरी कविता लेखेर भरेकी छन् । उनको कविता नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति वैरागी काइँलाद्वारा सम्पादित एक संग्रहमा संग्रहित छ । कवितालाई पुस्तकारका रूपमा पनि ल्याउनु हुन्छ कि ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘जिन्दगी समयको खेल हो । सोचेजस्तो कहिले नहुने । चाहना इच्छा भनेको बगिरहने खोलाजस्तो हो । खै के हुन्छ हेरौं ।’
श्रवण मुकारुङले शान्तिराम राईलाई भने– तपाईंको स्वर मन परेन नगाउनूस्
‘दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पस खोटाङमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पढ्दै थिएँ,’ संगीतकार शान्तिराम राईले अतीत सम्झे, ‘क्याम्पसले
धर्म–संस्कृतिको प्रहारविरुद्ध मानेभन्ज्याङमा थिरिथिरी
मानेभन्ज्याङ (ओखलढुंगा) । ‘अँ नि म, बिजोरी ढुकुरजस्तै, जलसिकारी, थलसिकारी, वनसिकारी, घरसिकारीबाट भाग्दै–भाग्दै, लुक्दै–लुक्दै, यहाँसम्म
२० लाखसहित सुमी मोक्तान पहिलो ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’
काठमाडौं । एक्सन लेडी नामले परिचित सुमी मोक्तानले ‘डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपाल’को ट्रफी उचालेकी
मञ्जु राई भन्छिन्– तिमी आधा म नि आधा
खोटाङ । नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा ‘तिमी आधा म नि आधा, कहिले हुने पूरा’ शीर्षाकृत म्युजिक
लालीगुराँसले धोका दिँदा उत्तिसद्वारा आत्महत्या
जंगलमा उत्तिस र गुराँस सँगसँगै उम्रेछन् । उत्तिस चाँडो, सुरिलो र हलहली बढ्ने बिरुवा हो
फुपुकी छोरीलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा ५३ वर्षीय पुरुष घरबाटै पक्राउ
रातमाटे (दुर्छिम) । फुपुकी छोरीलाई दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५ दुर्छिम रातमाटे गैराटोल खोटाङका
९० प्रतिशत सल्लेनी वनले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका सुख्खा क्षेत्र
वन वातावरणले स्थानविशेषलाई हरियाली बनाउन सघाउँछ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका ९० प्रतिशत वन सल्लाले ढाकेको